" ချစ်​ခဲ့ပါသည်​...သို့​သော်​ " — Steemit
" ချစ်​ခဲ့ပါသည်​...သို့​သော်​ "
niyann (28)in #love •4years ago
" နင့်​ကိုငါ့​နောက်​တ​ကောက်​​ကောက်​မလိုက်​နဲ့လို့​ပြောထားတာနားမလည်​ဘူးလား...လွမ်း​ရောင်​ခြယ်​ "
"ငါနင့်​​နောက်​လိုက်​တာ ဘာအပြစ်​ရှိလို့လဲ နသံ ...."
"အပြစ်​မရှိတာ ရှိတာငါမသိဘူး..ငါသိတာကနင်​ငါ့​နောက်​ကိုလိုက်​​နေတာ ငါအ​နေကျပ်​တယ်​..."
သူမကိုအပြစ်​​ပြောကာ ထွက်​​သွား​သော ​ယောနသံ
ဆိုသည့်​ သူမရဲ့ငယ်​ချစ်​ဦးဖြစ်​သလို သူငယ်​ချင်းလဲ
ဖြစ်​သည့်​ ​ကောင်​​လေးကိုသူမ မတားနိုင်​​တော့ပါ။
ထိုက်​ထိုက်​တန်​တန်​ ရရှိထားတဲ့သူတ​ယောက်​ဖြစ်​တဲ့အပြင်​ သူမနဲ့လဲ ငယ်​ငယ်​ကတည်းကသူငယ်​ချင်း​တွေဖြစ်​တဲ့သူက ​ယောင်္ကျားပီသစွာ​လေး​ထောင့်​မကျတကျမျက်​နှာ၊ နှာတံချွန်​​လေး​တွေ၊ ကကြီးပုံ
နှူတ်​ခမ်း​လေး​တွေနဲ့ လိုက်​ဖက်​စွာ ညိုညက်​​နေတဲ့အသား​ရေ​လေး​တွေနဲ့လိုက်​ဖက်​စွာ ဝတ်​စားဆင်​
ကျွန်​မကလား။ ကျွန်​မက​တော့သူနဲ့ဆန့်​ကျင်​စွာ မဖြူ့
တဖြူအသား​ရေ​၊ ပါဝါမျက်​မှန်​အထူ၊ မိတ်​ကပ်​ဆိုတာမရှိကြီးမားတဲ့ပါးကွက်​ကြီး၊ အဆိုးဆုံးက အလွန်​ဝ​နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်​နဲ့အတူ ပုံတုံးတုံးအဝတ်​စား​တွေ
" နသံ...မင်း ခြယ့်​ ကို​ပြောခဲ့တာမလွန်​ဘူးလား...."
"ယုံပါတယ်​..မင်း ခြယ့်​ ကိုငယ်​နိုင်​မှန်းသိပြီးသားပါ
"ငါတို့ ခြယ့်​ ကိုစချင်​လို့ အဲ့ဒါ..."
လာမ​ပြောနဲ့..ငါ မ နဲ့ချိန်းထားတယ်​..လစ်​ပြီ.."
​နောင်​တစ်​ချိန်​မှာ သူ့အတွက်​​နောင်​တကြီးဖြစ်​လာမယ်​ဆိုတာသာ နသံ သိခဲ့မယ်​ဆိုရင်​.........။
ဒီ​နေ့ဘာ​​ကြောင့်​မှန်းမသိ​ကျောင်းထဲဝင်​လာကတည်းကလူတိုင်း​ကသူမကိုကြည့်​​နေသည်​ဟု ခြယ်​ထင်​မိသည်​။ တစ်​ချို့ဆိုတီးတုိးစကား​တောင်​​ပြော​နေကြသလိုလိုပါ။ သူမပြင်​​နေကြပုံစံအတိုင်းပဲဝတ်​လာတာပါ။ ဘ​တွေထူးဆန်း​နေပါလိမ့်​?
ထိုအချိန်​မှာပင်​ သူမရှိရာသို့ အ​ပြေးတပိုင်း​ရောက်​လာတဲ့သူမ၏တဦးတည်း​သောသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ
"ဘာဖြစ်​လာတာလဲ ကဗျာ..ပြီး​တော့လူ​တွေကငါ့ကိုကြည့်​​နေကြသလိုပဲ..ငါဘာဖြစ်​​နေလဲ ကြည့်​ပါဦး....."
ကဗျာ့ စကားပင်​မ​စောင့်​နိုင်​​တော့ ခြယ်​ အတန်းရှိရာသို့အ​ပြေး​လေးသွားမိ​တော့သည်​။အတန်း​ရှေ့​ရောက်​​တော့လူအုပ်​ကြီးရဲ့ကြား သိလို​ဇောနဲ့တို့​ဝှေ့ကြည့်​မိ​တော့ သူမမျက်​စိပင်​မယုံနိုင်​​လောက်​​အောင်​ဖြစ်​မိ​လေသည်​။
[ ကျွန်ေ​တာ်​ ​ယောနသံသည်​ အများသိပြီးသည့်​အတိုင်း E ​မေဂျာမှ queen ဖြစ်​သူ နှိူင်းယှဉ်​ခ နှင့်​ချစ်​သူ​တွေဖြစ်​​နေကြပါ​သော်​လည်း လွမ်း​ရောင်​ခြယ်​
လိုက်​ကာ တဖက်​သတ်​ကြိုက်​​နေပါသဖြင့်​ ဒီလိုလူကို
စနိုက်​​ကြော်​ဟု​ခေါ်မလား ဒါမှမဟုတ်​ မျက်​နှာ​ပြောင်​
တိုက်​သည်​ဟု ​ခေါ်မလားဆိုတာ သူငယ်​ချင်းတိုပဲ့
( ငါ့သိက္ခာ​တွေ နင်​ဖျက်​ဆီးလိုက်​တာပဲ နသံ)
ခြယ်​ အံကိုတင်း​တင်းကြိတ်​ကာကပ်​ထားတဲ့စာရွက်​ကိုဖြုတ်​ပြီး ​ယောနသံရှိရာသုိ့ထွကလ်ာ​ခဲ့မိသည်​။
စိတ်​မဝင်​စားနိုင်​။ သူမသိတာက နသံ ဘာ့​ကြောင့်​ဒီ​လောက်​ထိရက်​စက်​ရလဲဆိုတာသာ အ​ရေးကြီးဆုံးမို့
4 years ago in #love by niyann (28)
Congratulations @niyann! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @niyann! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Hello @niyann! This isafriendly reminder thataPartiko user has just followed you! Congratulations!
Congratulations @niyann! You receivedapersonal award!